Ogaden News Agency (ONA) – Cabdullaahi Xuseen oo ka qeyb galay kulanki OYSU Sweden
Cabdullaahi Xuseen oo ka qeyb galay kulanki OYSU Sweden
Posted by ONA Admin	/ November 18, 2012
Waxaa maanta kulan balaadhan isugu yimid midawga dhalin yarada & ardayda S/Ogadenia (OYSU-Sweden) faraca magaala madaxda Stockholm. Dhalinta ayaa waxay ka arinsanayeen hawla badan oo la xidhiidha qorsha shaqeedkooda & waxyaalaha caadada u ahaa inay qabtaan.
Sidoo kale Halgame Halyeey Abdulahi Husien ayaa waxuu shirka ku ahaa marti sharaf asagoo walibana dhalinta la wadaagayay warbixino muhiim u ahaa ururka, Abdulaahi waxuu uga warbixiyay dhalinta kulankiisii ugu dambeeyay asbuucii hore ee uu kala qaybgalay hay’adaha xuquuqul insaanka ee dalka ka jira, waxuu kaloo u sheegay inay diyaar u yihiin in ay OYSU Sweden la sameeyaan xidhiidh saaxiibtinimo sidaa darteed waa inla helaabuu yidhi xubnihii sida joogtada ah ula shaqayn lahaa.
Abdulaahi oo hadalkiisii sii wata ayaa sidoo kale si kooban uga warbixiyay sababihii imaatinkiisii Sweden & marxaladihii kala gadisanaa ee uu kasoo maray gumaysiga misana uu kalasoo kulmay waaya aragnimada badan.
OYSU-Sweden ayaa sidoo kale falanqaysay qabashada shir balaadhan oo aykusoo dhaweeynayaan Halgame Abdulaahi si uu uga xaqabtiro dhamaan bulshada reer Ogadenia ee ku dhaqan wadanka Sweden. Waxaa hubaal ah maalinkaa ay dhici doonto xaflada soo dhaweeynta Halgame Abdulahi inay dad badani dareenkooda badalmi doono heli doonaana warbixin mugweeyn oo ku salaysan xaalada dhabta ah ee Ogadenia, maadaama Abdulaahi yahay shaqsiga maanta ugu xog ogaalsan ee arimaha ogadenia ay tahay in wax laga weeydiyo.
OYSU-Sweden waxay sii ogaysiinaysaa dhamaan bulshada reer ogadenia ee sweden, inkulan xasaasiya uusoo socdo, Halgame Abdulahi Husiena uu madashaa diyaar ugu yahay siduu xaqiiqada ula wadaagi lahaa, hadaba ayadoo lasoo gudbin doono xiliga waxaa hubaala maalinkaa qofkii ka maqnaado inuu wax muhiima gafay.
OYSU-Sweden ayuu dhawaan sidoo kale ku iman doonaa isbadal dhanka maamulka ah oo ayadana aad looga dooday qaabkii looguda gali lahaa ama la isugu diyaarin lahaa maamul cusub.
Shirka oo muhiimad badan xambaarsanaa qodobo kaloo badan misana muhiim ahaana looga dooday ayaa waxuu kusoo gabagaboobay jawi wanaagsan oo farxad & rayn rayn leh.